कोरोना भाईरस वुहान ल्याबबाट लिक भएको फौसीको दाबीमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको दह्रो साथ | SAMAJBAD
कोरोना भाईरस वुहान ल्याबबाट लिक भएको फौसीको दाबीमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको दह्रो साथ
एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले कोरोनाभाइरस सम्बन्धी राष्ट्रपतिका शीर्ष सल्लाहकार डा. एन्थोनी फौसीको बचाउ गरेको छ । हालसालै, उनका सबै काम सम्बन्धी मेलहरू सूचना स्वतन्त्रता ऐन अन्तर्गत आए, जसको समीक्षा भइरहेको छ। डाक्टर फौसी अमेरिकाको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईको मुख्य अनुहार बनेका छन् । आफ्नो कामको कारण, उनले प्रशंसा र आलोचना पनि प्राप्त गरे। व्हाइट हाउसका प्रवक्ता जेन सासाकीले भनेका छन् कि डा. फौसी हाम्रो लागि निक्कै महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। यद्यपि डा. फौचीको मेलले यो प्रश्न उठाइरहेको छ कि जब उनले वुहानको प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरसको सम्भावना खारेज गरिरहेको बेला उनले चीनलाई समर्थन गरेका थिए ।
वाशिंगटन पोस्ट अखबार, बजफिड न्यूज र अमेरिकी प्रसारक सीएनएनले डा. एन्थोनी फौसीबाट हजारौं व्यक्तिगत ईमेलहरू सन् २००२ बीचमा प्राप्त गरेका छन्। यी मेलहरू कोरोना भाइरसको बारेमा उनीहरूको कुराकानी भएको छ । गत वर्षको अप्रिलमा स्वास्थ्य मामिला सम्बन्धी संस्थाका एक अधिकारीले सार्वजनिक रुपमा डा. फौसीलाई एक ईमेलमा वैज्ञानिक आधारमा प्रयोगशाला चुहावट सिद्धान्त अस्वीकार गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए । कोविड १९ ल्याबबाट आएको कुनै प्रमाण छैन, तर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले यस विषयमा अनुसन्धानको आदेश दिएका छन्। उनको कदमलाई चीनले खण्डन गरेको छ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले कोविड १९ को प्रारम्भिक घटनाहरू वुहानको समुद्री जीवको बजारसँग जोडिदिए। यस आधारमा वैज्ञानिकहरूले अनुमान लगाए कि यस बजारमा जनावरहरू मार्फत यो भाइरस मानवमा फैलिएको हो । तर, हालसालै अमेरिकी संचार माध्यमहरूले यो संकेत दिएका छन कि वुहानको प्रयोगशालाबाट निस्किने यो भाइरसको सिद्धान्तको पक्षमा प्रमाणहरू प्राप्त भइरहेको छ। उनीहरूका अनुसार यो चुहावट शायद दुर्घटना हो।
सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा डा. फौसीले भने कि आलोचकहरू मेललाई अर्को सन्दर्भ खोज्दै छन्। उनले भने कि उनी भाइरसको उत्पत्तिको बारेमा खुला मनले सोचिरहेका थिए। डा. फौसीको पक्षमा जेन सासाकीले बिहीबार आफ्नो दैनिक प्रेस वार्तामा भने, राष्ट्रपति र प्रशासनले यो बुझायो कि महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्न र महामारीको समयमा जनताको आवाज बन्न डा. फौसीले उत्कृष्ट भूमिका खेलेको छ। गत महिना प्रकाशित वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्ट अनुसार नोभेम्बर २०१९ मा वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोजीका तीन कर्मचारी बिरामी परेका थिए, जस पछि उनीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो। यसको ठीक पछि, कोरोना संक्रमणको पहिलो केस रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो । केही दिन पछि राष्ट्रपति बिडेनले अमेरिकी गप्तचर एजेन्सीहरूलाई ९० दिन भित्र कोरोना भाईरस चिनियाँ ल्याब बाट आएको हो वा होईन भन्ने बारेमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
Previous articleकहिल्यै नसुध्रिने भयो भातीय एसएसबी, डेढ वर्षदेखि हुलाकी सडक निर्माणमा अवरोध
Next articleएकल राज्यको नेपाल स्वीकार्य हुँदैन : राजेन्द्र महतो